WBO fi TPLF: ‘Faayidaa Oromoo akka hin sharafnetti, diina waloo kuffisuu irratti wal-taane’ – Marroo Dirribaa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWBO fi TPLF: ‘Faayidaa Oromoo akka hin sharafnetti, diina waloo kuffisuu irratti wal-taane’ – Marroo Dirribaa
WBO fi TPLF: ‘Faayidaa Oromoo akka hin sharafnetti, diina waloo kuffisuu irratti wal-taane’ – Marroo Dirribaa
”Diina waloo waan qabnuuf, dhimma waraanaa irratti wal deeggaruuf TPLF waliin wal taaneerra,” jechuun ajajaa olaanaan Waraana Bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa BBC’tti himeera.
(BBC Afaan Oromoo) — Oromoon TPLF waliin walitti dhufeenya akkami akka qabu ifadha kan jedhu Kumsaan, yeroo TPLF dhaabota kaan waliin tahuun Itoophiyaa bulchaa ture uumanni Oromoo wareegama guddaa kaffalaa akka ture hima.
“Erga wareegama guddaa kaffalee haalicha jijjiree immoo, wareegama sana caalu argamee hin beekne, nameenyaa isaa xiqqeessetu isa mudate. Kanaaf diina waloo qabnu irratti waliin qabsaa’uuf wal tahuuf dirqamne,” jedha.
Mootummaan Itoophiyaa TPLF fi WBO (kan ABO-Shanee jedhuun) ‘diina Itoophiyaati, biyyattii diiguuf waliin hojjechaa turan’ jechuun irra deddeebiin himaa ture. Gareen lamaan dhaabbilee shororkeessitooti jechuunis paarlaamaan mootummaa federaalaa labseera.
Humnootni TPLF ji’oota sagal darbaniif mootummaa Itoophiyaa waliin waraanarra jiru. WBOn ammoo humna riphee lolaa Lixa Oromiyaa, Kibbaa fi Gidduugaleessa naannichaa keessatti mootummaa lolaa jirudha.
Waggoota dheeraaf diina walii kan turan TPLF fi WBOn mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf gama waraanaan wal tumsuuf waliigaluu fi tumsa gama siyaasaan godhamuf mariin itti fufee akka jiru mirkaneessaniiru.
Hogganaan TPLF, Dr Dabratsiyoon G/Mikaa’el, gama isaatiin WBO waliin haasaan taasifamaa jiraachu mirkanneessuu Rooyitars gabaaseera.
Dubbii himaan TPLF Geetaachaw Raddaa, akkasuma ”waliigaltee tokkorra gahuuf hojiin hojjetamaa jira,” jechuun Rooyitarsitti himaniiru. Dabaluunis ”egeree Itoophiyaa irratti warreen gahee qaban waliin hojjechuun waan haaraa miti,” jechuunis dubbatan.
Seen-duubee WBO fi TPLF
ABO fi TPLF seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti erga hundaa’anii dhaabota umurii dheeraa qabanidha. Waraanni Bilisummaa Oromoo damee waraanaa ABO tahuun qabsoo mootummaa Dargii irratti gaggeessaa ture.
TPLF akkasuma mootummaa dargii irratti qabsoo cimaa gaggeessuun akka kufu gochuu keessatti shoora ol aanaa taphateera.
Qaamolee lameen erga mootummaan dargii kufee mootummaan ce’umsaa yeroo hundeeffamus qunnamtii qabaachaa turan.
Garuu bara 1991 wal dhabdee gidduu isaaniitti uumameen ABO’n mootummaa Chaarteraa keessaa yommuu bahu, ol aantummaa siyaasaa fi humna waraanaa biyyaatti kan of harkaa qabu TPLF gaaga’ama hamaa waraana ABO fi hoggantoota isaa irraan gaheera.
Ergasii ABOn biyyaa bahuun mootummaa adda durummaan TPLFn hogganamu irratti qabsoo hidhannoo gaggeessaa ture.
TPLF aangoo siyaasaa harkaa qabu bara 2018tti ture fincila uummataan dhabee, MM Abiy Ahimad aangootti erga dhufaniin booda, wal dhabdeen mootummaa giddugaleessaa waliin qabu bal’achaa dhufuun Sadaasa 04, 2020 gara waraanaatti seene.
MM Abiy aangootti erga dhufuun booda gara biyyaa deebi’uun gara qabsoo nagaatti kan gale ABO irraa cabuun qabsoo hidhannoo gaggeessuuf bosonatti kan hafe WBOn waggoota sadan darbaniif mootummaa waliin waraanarra jira.
Mootummaan Itoophiyaa ABO-Shanee jechuun kan waamu WBO ergamtoota TPLF jechuun irra deddeebiin himata.
Waggoota sadan darban gareewwan lameen waliin ta’uun Lixaa fi Kibba Oromiyaa keessatti ajjeechaa fi miidhaa gara garaa uummata nagaa irraan geesisa turan jechuun himata.
Gareewwan lamaanuu amma dura hariiroo qabaachuus ta’e, lammilee nagaarraatti ajjeechaa fi miidhaa geesisuu haalaa turan.
”Oromoon madaa qaba”
Uummanni Oromoo uummata biyyattii kaan waliin bulchiinsa TPLF mormuun qabsoo hadhawaa gaggeessaa turuun akka dhaabni kun aangoo gidduugaleessaa irraa ka’u gochuun ni beekama jedha maqaa qabsoo ‘Jaal Marroo’ jedhamuun kan beekamu Kumsaa Dirribaa.
”Oromoon madaa qaba. Yeroo fudhannee baay’ee irratti mari’annee haala rakkoo furuu danda’uun, ammoo faayidaa Oromoon barbaadu sharafuu karaa hin dandeenyeen yeroof TPLF waliin diina waloo waliin qabnu kuffisuu irratti bifa waraanaan waliin hojjechuu irratti wal hubannoorra geenyeerra,” jedha.
”Gootummaa si barbaada. Murtii fudhachuu si gaafata. Kana dura hariiroo hin qabnu. Ammas gargaarsa irraa barbaannu hin jiru, hin jiraatus.
“Siyaasa keessa taphatu jira. Siyaasni yeroo haaloo hin qabnetu jira. Diinni dhaabbataas tahe firri dhaabbataan adunyaarra hin jiru. Yeroo ilaaluu fi yeroo waliin tarkaanfachuu barbaada,” jechuun akkamiin akka diina isaanii kan ture TPLF waliin dhaabbachuuf waliigalan irratti dubbate.
Wal amantaa gidduu isaanii jiru irratti kan gaafatame Marroon ”egaa inni kun kan yeroon furu taha” jedha.
“Barri 2021 bara 1991 tahuu dhiisuus, tahuus danda’a. Dammaqinsi uummatni Oromoo haala siyaasaa har’aa fi haala qabsoo TPLF bara 1991 fi isaa as jiru irratti adda. Haala siyaasaa biyyattii amma jiru irraa siiqanii ilaaluurra itti siqanii waliin hojjechuutu caala jenne murteesine” jedhe.
Aanga’ootni mootummaa Itoophiyaa Marroo Dirribaa ajjeefamuu himaa erga turan booda Al-jazeeraa irratti mul’ate
Mootummaan Itoophiyaa qaamoleen lamaan akka waliin hojjechaa turaniif biyya nagaa dhowwatan himataa ture. TPLF deeggarsa leenjiif meeshaa waraanaa WBOf gochaa akka tures himaa ture. ”Sadarkaa sanarra har’ayyuu hin geenye,” jedha Marroon.
“Mootummaan Itoophiyaa meeshaa waraanaa eessaa fi eenyurraa akka fudhannu nuuf hin eeyyamu. Garuu dhugaan jiru gargaarsi [TPLF] irraa fudhannus gaafannuus hin jiru,” jedha.
Hariiroo isaanii irratti gaafatamee tibbana ji’a tokkoof walakkaa kan tahuf waliin dubbataa turuun kanarra geenye jedhe.
Waliigaltee isaanii kana irratti bal’inaan dubbachuu kan hin barbaanne Marroon, ”ammatti waliigalteen jiru dhimma waraanaa irratti. Isaan Tigiraay keessatti, nuyi Oromiyaa keessatti wal hubachuuf wal taane,” jedha.
“Fuulduratti gama siyaasaan akkamiin waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti marirra jira. Sun fuulduratti kan baramu taha,” jedhe.
Kaayyoon qabsoo WBO maali jedhee gaaffii BBC’n dhiyeesseef ”Uummanni Oromoo cunqursaa jalaa bahee mirga hiree murteeffannaa ofii isaa akka murteeffatuufidha” jedha.
WBOn gidduu kana Lixa Oromiyaa, Gidduugaleessa, Kibba, Bahaa fi Kaaba Oromiyaa keessatti duula gaggeessa jiraachuus himeera.
Waamicha karaa nagaa rakkoo furachuu ilaalchisee kan gaafatame Marroon, “karaa gaaffii sabaa fi sab-lammii deebisuu danda’uu fi mirga uummata keenyaa kabachiisuu danda’u taanaan ni simanna,” jedha.
“Garuu yeroon isaa waan itti darbee fi mootummaanis fedha waan qabu miti,” jechuun deebise.
Lolli, Hidhaa fi Ajjeechaan Oromoo Irratti Gaggeeffamu, Qabsoo Oromoo Ni Jabeessa Malee Hin Laaffisu! (Ibsa…
TDF in Control of Wurgesa, Gatachew Reda big Claims, OLA Jal Maroo